5 Fitsipiky ny maha-Wingman
Last nohavaozina: Sep. 19 2019 | 2 min namaky
Ny fananana ny azo itokisana sy manam-pahaizana manokana avy ny lafiny wingman dia afaka mamaritra raha ianao hiala amin'ny vehivavy tsara tarehy na Solo. Eto ambany, efa nanangona ny tsara indrindra noho ny maha fitsipika ny farany wingman.
fitsipika #1: Izay manatona aloha, noeritreretin'ny
amim-pahatsorana, mitaky herim-po ny manatona ny vondrom-behivavy sy ny dresaka noho ny mety ho voatifitra izy na tsy nikapoka azy io eny. Mila fahaiza-manao ihany koa izany mba hanatona ny vehivavy amin'ny fomba tsara. Noho izany ny fanapahana voalohany: na iza na iza manatona soa aman-tsara aloha, mahazo safidy voalohany ao amin'ny vehivavy.
fitsipika #2: Hitondra ny namanao tsara
Vehivavy mianatra be dia be avy amin'ny fandinihana indrindra mikasika ny ny olona izy ireo liana amin'ny. Tena toy ny namana ny olona mahafinaritra indrindra fantatrao. Tsy hoe fotsiny ho izany fahatokiana izany hampiely eny fa ny vehivavy dia avy hatrany tonga mainka tia anao. Ditching ny sakaizany ho vehivavy ianao dia efa nahalala ny folo minitra fotsiny dia mampiseho fa ianao no mamoy fo.
fitsipika #3: Hajao ny tahan'ny
Ary raha ny namanao no miresaka amin'ny iray hafahafa isan'ny vehivavy, haka fa tahaka ny tra mba hanatona ny vondrona mba hanampy hampifandanjana ny tahan'ny. Tsarovy, raha farany mikapoka azy io eny amin'ny ankizivavy iray indrindra, mbola mila hijanona amin'ny vondrona. Miala ao amin'ny vehivavy ny lehilahy dia handao wingman latsaka izay midika hoe efa tsy nahomby. Ny hany fotoana dia ekena ny handao dia raha tahan'ny aza. Izany fomba samy hahazo irery fotoana miaraka tsara tarehy ny vehivavy.
fitsipika #4: Ve ka lazao ny namanao ny zavatra tsy afaka ny
Ity fitsipika ity no zava-dehibe ho an'ny wingmen. Andraso mandra namanao mankany amin'ny efitra fandroana na atleta zava-pisotro, ary miresaka momba ny toetra tsara indrindra ao amin'ny fomba tsy mivantana. Fa tombony hevitra, Tsy miresaka mivantana ny zazavavy dia liana amin'ny. Miresaha amin'ny namany ka miandry mandra-mamerina izany.
Mba hanampiana ny namana tsy hoe loatra mivantana, raha toa ny alina dia miolikolika midina soso-kevitra iray na ny zava-pisotro farany mandeha niakatra ho any amin'ny tampon-trano mba hifaly amin'ny mahagaga fijery.
fitsipika #5: Manaova toy ny lalao dia ny
Rehefa hitanao fa pitik'afo eo amin'ny namanao sy ny vehivavy dia ny liana amin'ny, manomboka manao sy miteny tahaka ireo efa roa. Io fomba fiasa ny “hanisy”, dia hanana fiantraikany mahagaga toy ny vehivavy vokatry ny zana-fifandraisana mihoatra noho izay no tena lazaina.
Miaraka amin'io sehatra io tari-dalana ao amin'ny tanana, ianao izao vonona ny hanana fahombiazana alina avy eo amin'ny tanàna.
Asehoy ny fitiavanao tsy Words